စက်မှု Filter ကိုအိတ် Deduster China Manufacturer
ဖုန်မှုန့် Extraction စနစ်,filter သည့်အရာတစ်ခုစျေး,Filter ကို Tube ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ function
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဖုန်မှုန့် Extraction စနစ်,filter သည့်အရာတစ်ခုစျေး,Filter ကို Tube ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ function
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > ကျည်တောင့်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter > စက်မှု Filter ကိုအိတ် Deduster
 စက်မှု Filter ကိုအိတ် Deduster
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းတစ်ခုဆလင်ဒါသို့ခေါက်သည်ကို ထောက်. (1), ပု filter ကိုပစ္စည်းများ၏သိပ်သည်းဆကြီးမားသည်, ဒါကြောင့်မြေမှုန့်စုဆောင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ရှိပါတယ်။
filter သည့်အရာတစ်ခု type ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း
2. filter ကိုကျည်တောင့်၏အမြင့်, တပ်ဆင်ခြင်းအဆင်ပြေသေးငယ်သည်နှင့်ကို အသုံးပြု. နှင့်ပြုပြင်များ၏ပမာဏသေးငယ်သည်။
3. တူညီသောအသံအတိုးအကျယ်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏စစ်ထုတ်ဧရိယာအတော်လေးကြီးမားသည်ကို၎င်း, filtration မြန်နှုန်းသေးငယ်သည်နှင့်ခုခံရေးကြီးမားမဟုတ်ပါဘူး။
4. Filter ကိုပစ္စည်းများခေါက်နဲ့ခေါက်, နှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမှာတင်းကျပ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိ, ယိုစိမ့်တောင်းမဟုတ်ရင်ကြောင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းသွေးခုန်နှုန်း filter ကိုကျည်တောင့်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်:
1, filter ကိုကျည်တောင့်သာမန် filter ကိုပစ္စည်းမှ submicron စူပါပါးလွှာဖိုင်ဘာတစ်အလွှာပူးတွဲဖို့ filter ကိုပစ္စည်းအဖြစ်တင်သွင်း polyester ဖိုင်ဘာကိုအသုံးပြုသည်ကို၎င်း, ဖိုင်ဘာ၏အစီအစဉ်အတွက်ကော်အလွှာအပေါ်အလွန်နီးစပ်သည်နှင့်သေးငယ်သောဆန်ခါပေါက်တွေအများဆုံးပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ် အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းမျက်နှာပြင်အပေါ် submicron ဖုန်မှုန့်အမှုန်။
2, filter ကိုခြံများအသုံးပြုမှုအတွက် filter ကိုဧရိယာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြေမှုန့်စုဆောင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းစေနိုင်သည်။
3. filter ကိုပြွန်များ၏အမြင့်သေးငယ်သည်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုသေးငယ်သည်။
4, တူညီတဲ့အသံအတိုးအကျယ်မြေမှုန့်စုဆောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, filtration ဧရိယာ filtration မြန်နှုန်းသေးငယ်သည်, အတော်လေးကြီးမားသည်ကို၎င်း, ခုခံကြီးမားသောမဟုတ်ပါဘူး။
5. တစ်ခုတည်းယူနစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ပြာများသန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်း On-line ကိုနည်းလမ်းသန့်ရှင်းရေးသွေးခုန်နှုန်းဂျက်ချမှတ်။ ပြာသန့်ရှင်းရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်သွေးခုန်နှုန်း controller ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ Filter ကိုတစ်ဦးကအရေအတွက်ထိရောက်သော filtration ဧရိယာတိုးမြှင့်ဖို့မြေမှုန့်စုဆောင်းထားကြသည်။ တစ်ဦး (သို့) filter ကိုပြာ setting ကို setting များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံသည့်အခါကပြာများသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့တစ်မှုန်ရေမွှားမှုတ်ကိရိယာနှင့်အတူစတင်သည်နှင့်မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိရိယာ၏စစ်ဆင်ရေးထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲအောင်မြင်နိုင်ပါသည်သို့မှသာအခြား filter များ, ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ် နှင့်ဖုန်မှုန့် remover ကို run ဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်; အဆိုပါပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့် remover ပြာသန့်ရှင်းရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ off-line ကိုသွေးခုန်နှုန်းအလိုအလျောက်လည်ပတ်သန့်ရှင်းရေး။ တိုင်းစစ်ထုတ်အခန်းထဲကယင်း၏ထိရောက်သော filter ကိုဧရိယာတိုးမြှင့်ဖို့ထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မြေမှုန့်စုဆောင်းတဲ့ filter ကိုအခန်းထဲကပြာ setting ကို setting များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောအခါ, ပြာရှင်းလင်းဖို့မှုတ်ကိရိယာနှင့်အတူစတင်သည်နှင့်မြေမှုန့်သန့်ရှင်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိနိုင်မည်နှင့်ဖုန်မှုန့် remover ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် run နိုင်အောင်အခြား duster အခန်းပေါင်း, ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ် ။
လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ 6, မြင့်သောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု (များသောအားဖြင့်ဖွင့်ဖို့ 99,6%) ။
ဖုန်မှုန့် filter ကိုစက်မှုဇုန်မြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကျည်တောင့် Filter ကိုဖုန်ကောက်ခံရေးဒီဇိုင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဖုန်မှုန့် Extraction စနစ် , filter သည့်အရာတစ်ခုစျေး , Filter ကို Tube ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ function , စက်မှုပိုလန် Extraction စနစ် , 208 ဖုန်မှုန့်အိတ် , polyester ဖုန်မှုန့်အိတ် , ကာဗွန်အမှုန့် Mixing ပစ္စည်း , High Quality ဖုန်မှုန့်အိတ်